Kismaayo News » Ma iska cafinaa Hogaamiye kooxeedyada?
Ma iska cafinaa Hogaamiye kooxeedyada?
Kn: Ma jirto cid cafin karta qof dambi galay oo aanan ka ahayn qofkii dambiga laga galay, mana jirto cid cafin karta qof qaranka dambi ka galay, dadka Soomaaliyeedna waxa ay xaq kasta u leeyihiin in ay helaan cadaalad, kuwii dambiyada ka galayna maxkamad la horkeenaa. Laakiin marka ay dhacdo in kooxo iyagaba lagu tuhunsanyahay dambiyo ay galeen, aysanna jirin doorasho shacab oo ay mesha ku yimaadeen in ay dadka midna dambiile ku shabadeeyaan, midna boono cad siiyaan iyagoo ujeedooyin siyaasadeed ka leh, waxaa imanaysa in wax la’iska weeydiiyo arrimaha socda oo dhan. Ma jirto ciqaab qof la mariyo oo ku filan in ay dib noogu soo celiso wixii naga lumey ama naga bogsiiso, mana jirto cid u qiil samayn karta inaanan la ciqaabin kuwii dhibka geystey.
Waxaa tixgalin taasi la mid ah ay tahay in la siiyo sidii lagu xaqiijin lahaa in mustaqbalka dhow iyo kan fogba laga hortago in aysan dhicin wixii nagu soo dhacay, lagana shaqeeyo sidii looga bixi lahaa xaaladda hadda uu dalka ku jiro. Marka aad ka warheyso hogaamiye kooxeedyo wali hubeysan, iyo kuwa wali awoodo badan iyo saameyn leh, kuwaasoo qadar suuldhabaale ah qalqal cusub ku galin kara xasiloonida hadda lagu naaloonayo caasimadda, lagana filayo magaalooyinka kale, waxaad bilaabaysaa in aad ka walwasho waxa uu noqon karo mustaqbalka dhow haddii aanan laga taxadarin waxyaalo badan. Haddii dad mansab iyo kursi oo kaliya doonaya ay majaraha u qabtaan aayaha dalka, waxa ay taasi keeni kartaa dhibaato sii dabo dheeraata. Tusaale ahaan, lixda saxiixayaasha Roadmap-ka waxa ay kusoo heshiiyeen in qof dambiile ah uusan ka mid noqonin baarlamaanka, hagaag, oo yaa dambiile ah?, ma waxaa jirta cid aanan dalka dambi ka galin oo maanta ku jirta siyaasadda Soomaaliya?. Isla kuwa heshiisyada saxiixay laftooda waxaa loo heystaa in ay dhaceen malaayiin doolar oo aduunka gargaar ahaan ugu soo dhiibey shacab macaluulaya, waxayna mas’uul ka yihiin dad badan oo gaajo u dhamaaday, kuwa ganacsatada sheegayana waxaa loo heystaa dambiyo waaweyn oo ay ka midyihiin in ay dalka keeneen cunto dhacday oo ay dad badan ku sumoobeen. Hadda markii ay soo muuqatay rajo wanaagsan in dad dano siyaasadeed leh, oo qaarkood dambiyo loo heysto ay nagu yiraahdaan “hebel iyo hebel ayaa dambiile ah ama hogaamiye kooxeed ah, baarlamaankana ma galayo”, ma dan ay anaga noo hayaanbaa mise dan ay naga burburinayaan?. Waa sax waxaa jira dad dalka dambiyo waaweyn ka galay oo aysan ahayn in ay madax noo noqdaan, laakiin waa goorma goorta ay tahay in sidaasi la yeelo?. Ku dhawaad 80 qof ayaa dib loogu celiyey odayaasha kuwaasoo laga reebey baarlamaanka cusub, waxaana ka taagan muran weyn oo qarka u saaran in uu ragaadiyo geedosocodkii nabadda iyo dowladdii dalka loo dhisayay. Sida uu maanta sheegey madaxweynaha DKMG ah, gudiga xulista xildhibaanada ma ahan ay farogashadaan qofka loosoo xulayo baarlamaanka iyo qofka kale, waxa uu sheegey in qofka dambiilaha ah ee baarlamaanka laga reebayo uu yahay qof ay maxkamad ku cadaysay dambigiisa, aysana jirin cid ay maxkamad xukuntay. In baarlamaanka laga celiyo dadkii horey u ahaan jirey hogaamiye kooxeedyada, waxa ay keeni kartaa in mucaarad hubeysan oo kan hadda jira aanan ahayn uu ka horyimaado dowlad kasta oo la dhiso. Hogaamiye kooxeedyada qaarkood waxa ay wali hub ugu keydsanyahay caasimadda dhexdeeda, waxana ay taageero ka heystaan beelaha ay kasoo jeedaan oo dareemaya in lagu dulminayo waxa socda. Dadka magacyadooda dib loo celiyey waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Xaabsade oo kasoo jeeda magaalada Baydhabo oo ay hadda dowladda gacanta ku heyso, waxaa magaciisa gidbiyey beeshiisa oo uu taageero badan ka heysto, mar uu maanta hadlay waxa uu sheegey in uusan isaga hogaamiye kooxeed ahayn, islamarkaasina beelaha Digil iyo Mirifle ay ahaayeen kuwa iska difaaceen beelo kale oo kusoo duuley.
Marka Xaabsade laga reebo baarlamaanka, sidee ayay dowladda oga hawlgalaysaa Baydhabo?. Arrin kale waxa ay tahay sida arrintani wax oga tarayso dib u heshiisiinta la doonayo in Soomaalida la dhex dhigo?, sidee lagu helayaa dib u heshiisiin aysan qeyb ka ahayn dadkii dhibka geystey?
Aragti ahaan, KismaayoNews waxaa la quman in aanan la jilaafaynin sida ay wax u socdaan, waxaan qabnaa in aanan la joogin xili dambiileyaal lala xisaabtamo, aysana jirin hogaan ay shacabka doorteen oo si cadaalad xaqsoor u keenta. KismaayoNews.com KismaayoNews.com